Guushii Trump ka dib ficillada nacaybku miyey kordhayaan? | Goojacade
Home War Guushii Trump ka dib ficillada nacaybku miyey kordhayaan?
Guushii Trump ka dib ficillada nacaybku miyey kordhayaan?
Daraasiin warbixinno ku eedaysan dambiyo nacayb ku salaysan ayaa lagu soo bandhigay baraha bulshada tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii Mareyanka ee uu ku guulaystay Donald Trump. “Waxaan fadhiyey maktabadda Iskoolkeyga, ka dibna nin aad u wayn oo xiran funaannad ay ku qoran tahay Trump oo socday meel iga dambeysae, ka dibna waxaan damcay inaan qooraansado xagga dambe illaa aan ka warhelay gacan madaxa iga saaran, oo isku dayaysaysa inay xagga dambe u jiido xijaabkeyga”.
Ardayaddan oo dhigata jaamacadda University of New Mexico, ee dalka Mareykanka waxay u sheegtay BBC sida ay uga baxsatay qofka soo weeraray. “Waxaan u sheegay inuu leeyahay xuquuqda wax kasta oo uu rumaysan yahay, isla markaanna uu oran karo wax kasta oo uu doonayo, laakiin durbadiiba markii uu gacanta madaxa iga saaray ka dibna xaaladdu waa ay qaraaraatay”, ayay tiri. “Intaas ka dib wuu dhaqaaqay, isagoo leh “Waxaan rabaa inaan fariisto ka hor inta aadan bam gacmeed igu soo tuurin” ayay tiri. Dhacdadan waxay ka mid tahay daraasiin dhacdooyin lagu eedeynayo weeraro ku salaysan diin iyo isir nacayb huwan, kuwaaasi oo lagu wadaagayo baraha bulshada tan iyo doorashadii Salaasadii. Dhacdooyinkaasi qaarkood eedahoodu suurtagal ma ahan in la xaqiijiyo iaddii mid ka mid ah xiriirka la leeyihiin doorashadii Salaasadii. Calaamadan ayaa lagu arkay meelo badan
Dhacdada ka dhacday Jaamacadda New Mexico, ee qabsatay gabadha ardayada ah waxay wargalisay maamulayaasha Jaamacadda laakiin Booliiska lama wadaagin. “Waxaan go’aansaday innaan dacwad ah gudbin, waayo halkan uma joogo innaan dad soo bandhigo” ayay tiri gabadha oo hadalkeeda sii raacisay, “wuxuu sameeyey qalad, waxaanna filayaa in sida sheekadan u shaacday in uu cashar ka qaadan doonno”. Masuuliyiinta Jaamacaddu waxay sheegeen in ay baaritaan ku sameyn doonnaan tiro shilal ka dhacay xarunta, laakiin aannay bixin karin wax tafaasiil shakhsiyadeed ah laakii ay u daynayaan sharciga Federaalka. Natiijadii doorashadii Mareykanka ka dib waxaa jiray tiro warar la la aamin karo oo sheegaya dambiyo nacayb ku salaysan. Philadelphia, tiro calaamadda is dhaafka ee Naziga ayaa lagu qoray dhismayaal iyadoo la raacinayo hadalo lagu taageerayo Trump, mid ka mid ah waxaa lagu qoray “Xukunka Trump” iyo ereyo kale oo cunsuriyad huwan ayaa lagu qoray baabuur. Tuulo yar oo lagu magacaabo Wellsville kana mid ah gobolka New York gidaar ayaa waxaa lagu qoray caalamadda Naziga iyo hadalka “Mar kale awoodii Ameerika aan soo celino” oo ah hadal uu caan ku yahay Doland Trump. Magaalada San Diego,Arday ayaa boob waxaa u gaystay laba nin, kuwaasi oo Booliisku timaamay inay ku hadlayeen “ereyo ku saabsan madaxweynaha la doortay Trump iyo Muslimiinta” ka hor intii aannay boorsadda ka dafin gaarigeedanna xadin, waxay Booliisku sheegeen in arintan ay baaritaan ugu samaynayaan dambi nacayb. Waa kuma Donald Trump? Sawirkan laga sameeyey muuqaal Facebook-ga la soo galiyey. Rabshado iyo hanjabaadyo ka dhan ah taageerayaasha Trump ayaa la soo wariyey. California gabar taageeradeedda Trump ku shaacisay barta internet-ka ee Instagram-ka ayaaa maalinkii xigay lagu weerary Iskoolka, waalidkeed waxay sheegeen in weerarkaasi uu ahaa mid siyaasad ku salaysan In Chicago. Nin cadaan oo galay shil baabuur ayaa waxaa garaacay oo dhac u gaystay koox dad madow ah, muuqaalka laga duubay dhacdadaas ayaa dhex wareegaya barta Internet-ka ee Facebook-ga, dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in ay maqlayeen “Trump ha u codayn”.]]>
Previous articleDaawo Gudiga Fulinta Xisbiga WADDANI oo xilkii iyo xubinimadii ka qaaday Axmed Muumin Seed
Next articleIsimada iyo Waxgaradka Khaatumo oo ku gacansaydhay qaybinta xubnaha Aqalka Sare qaybta Somaliland